Cambuur vs Volendam - ဟော်လန် Jupiler လိဂ် | ဘောလုံးခန့်မှန်း
+7/ 9584-983-763info@soccerbets ကိုhoot.com
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ:3စက်တင်ဘာ 2017 | Posted:3စက်တင်ဘာ 01:09 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 2004 ကြိမ်.
Cambuur vs Volendam – ဟော်လန် Jupiler လိဂ်
Cambuur vs Volendam – ဟော်လန် Jupiler လိဂ် , Volendam သူတို့ရှိသည် Eredivisie.Despite မဟုတ်တူညီခိုင်မာတဲ့ရေနွေးငွေ့အတွက်အဟောင်းဘုန်းကြီးသောရက်ပေါင်း recover လုပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်လည်းရည်မှန်းချက်ကြီးအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, မြှင့်တင်ရေးကစား-ချွတ် position.Somehow အတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီ alwyays အဆုံး, Volendam လည်းဦးနှောက်အာရုံကြောကစားနေဆဲဒီတော့တပ်မက်လိုချင်သောအ Eredivisie အတွက်တိုးဖို့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဘူး.
“အဆိုပါ Oranjes” ချော Helmond sport.The ပွဲစဉ်ဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးမိနစ်များတွင်တစ်ဦးရည်မှန်းချက် conceding ပြီးနောက်အိမ်မှာကယ့်ကိုဆင်းရဲသောသူသည်ရာသီစတင် 2-2, ဒါပေမယ့်သူတို့က away.Volendam အပေါ် OSS တဘက်၌သူတို့ဆုံးရှုံးဖို့တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်ဂိုးဒါဒီသင်ခန်းစာမလုံလောကျခဲ့ပုံရသူတို့ကအံ့သြဖွယ်နှင့်အတူပြီးဆုံးသည့် league.Last ရာသီအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအိမ်မှာအသင်းများကိုတဦးဖြစ်ဟု 9-7-3 သူတို့သွင်းယူဘယ်မှာပုံစံ 31 ဖော်ပြထားခြင်းမှ goals.Something, ပိုကြီးတဲ့အသင်းများကိုဆန့်ကျင်, Volendam တစ်နည်းနည်းနဲ့၎င်းတို့၏ဘောလုံးကစားများနှင့်မကြာခဏသူတို့ Nac Beda ဆန့်ကျင်အနိုင်ရစီမံခန့်ခွဲသည့် surprise.Last ရာသီရောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲ, ငယ်ရွယ် PSC, Eindhoven, ဂျုံအေဂျက်နှင့် Cambuur ဆွဲရန်စီမံခန့်ခွဲ.
Cambuur ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလေးသာပု summer.Against ကာလအတွင်းကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့ကစားသမား built အဖြစ် NEC ပြီးနောက်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြောဆို, အဆိုပါရှုံးအောင် De Graafschap နှင့်ဂျုံ Ajax.Despite ကျော်ရှုံး Cambuur ဖြောင့်ဖို့နဲ့စတင်, အဖွဲ့၏အဓိကဦးစားပေးနေတုန်းပဲ Cambuur သူတို့ AZ Alkmaar.Cambuur ဖို့ 95 မိနစ်အတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရရှိရာနယ်သာလန်ဖလား၏ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲသည့် promotion.Last ရာသီ trickiest အသင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သူတို့များသောအားဖြင့်အိမ်မှာပိုကောင်း play ဒါပေမဲ့သူတို့ပျောက် well.Actually အဖြစ်အပေါ်တကယ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်, ရာသီသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲသားကိုစတင်နှင့်အတူကသူတို့ကပိုသက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသော်လည်းတဦးတည်းအရာသေချာဖြစ်ပါသည် – သူတို့တုံ့ပြန်မှုလိမ့်မည်! နောက်ဆုံးရာသီ Cambuur နှင့်အတူကွယ်ပျောက်အပေါ်အရမ်းအန္တရာယ်ခဲ့ကြသည် 9-2-8 သူတို့သွင်းယူဘယ်မှာ 29 အခြားတစ်ဖက် goals.On, သူတို့လက်ခံရရှိ 23 ရည်မှန်းချက်များနှင့်အသောသူတို့သည်အတူတက်အဆုံးသတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲရှင် 8 အားလုံးအတွက် loses.All, နှစ်ဦးစလုံးအသင်း season.Both အသင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိရှာဖွေနေခြင်းနှင့်အလွန်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဘောလုံးကစားကြပြီးမကြာခဏ High-အမှတ်ပေးပွဲလုပ်သူတို့တစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားသောဤအသင်းများလက်တိုင်း situation.Hand ကနေအလွယ်တကူဂိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်နေကြတယ် နောက်ကျောများတွင်ပြဿနာများ, က halftime မှီတိုင်အောင်ဆင်းသက်စေခြင်းငှါ.
Olympiacos Piraeus vs Tottenham ( အောက် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် & 1.90 )
ဇင်းနစ် vs လိုင်ယွန် ( 1 & 1.65 )
Toulouse vs စိန့် Etienne ( 1 & 1.60 )